डिजिटल मल्टीमिटर डीटी -830 बी: प्रयोगकर्ता पुस्तिका र समीक्षा
मल्टीमिटर डीटी -830 बी चीन उत्पादनको उपकरण हो, जुन धेरैले प्रयोग गरेको छ। जो नियमित रूपमा इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्झौता गर्न सक्छन् त्यस्ता प्रविधि बिना काम गर्न सक्दैन। यो आलेख वर्णन गर्दछ कि DT-830B मल्टीमीटर छ। यन्त्रको विस्तृत वर्णनको साथ निर्देशनले शुरुवातका लागि यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
त्यहाँ थुप्रै मोडेलहरू छन् कि गुणवत्ता, शुद्धता र कार्यक्षमतामा भिन्न हुन्छन्।
उपकरण निम्न आधारभूत मापको लागि डिजाइन गरिएको छ:
विद्युतीय वर्तमानको मूल्य;
बिजुली सर्किटमा2बिन्दुहरूको बीच भोल्टेज;
यसको अतिरिक्त, डीटी -830 बी र अन्य समान मोडेलले धेरै अतिरिक्त कार्यहरू गर्न सक्दछ:
सर्किटलाई कल गर्नुहोस् 50 ओमहरू तल अडियो अलार्मसँग प्रतिरोध;
ईमानदारीको लागि अर्धचालक डायोडको परीक्षण गर्नुहोस् र यसको अगाडि भोल्टेज निर्धारण गर्नुहोस्;
अर्धचालक ट्रांजिस्टर जाँच गर्नुहोस्;
विद्युत क्षमता र आचरण मापन गर्नुहोस्
Thermocouple संग तापमान मापन गर्नुहोस्;
हनोनिक सिग्नलको फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गर्नुहोस्।
मल्टीमिटरले कसरी काम गर्दछ?
डायलले प्लास्टिक वा गिलास डिस्प्लेमा अंकहरूको रूपमा मापन मानहरू देखाउँदछ।
स्विचले उपकरणको साथ साथै स्विचन दायराहरूमा कार्य प्रदान गर्दछ। जब प्रयोगमा छैन, यो "बन्द" मा सेट गरिएको छ।
परीक्षाको स्थापनाको लागि शरीरमा स्याकेटहरू (जडानहरू)। मुख्य चीज, अभिलेख COM र नकारात्मक polarity संग एक सामान्य उद्देश्य छ। कालो तारसँग परीक्षण नेतृत्व यसमा सम्मिलित छ। अर्को, चिन्हित VΩmA, एक लाल भावना संग सकारात्मक polarity छ।
रातो र काली रङको लवेटिभ तारहरू।
ट्रांजिस्टरहरूको निगरानीको लागि प्यानल।
मल्टीमिटर डीटी -830 बी: मापको मोडको विस्तृत वर्णनको साथ निर्देशन
सबैलाई थाहा छैन कसरी यन्त्रको आवश्यक मापदण्डहरू उपाय गर्न सकिन्छ। DT-830B मल्टीमीटर को उपयोग गर्दा, निर्देश पुस्तिका को पछि लागी चाहिए। अन्यथा, यन्त्र जलाउन सक्छ।
1. प्रतिरोध माप
प्रकार्य आवश्यक छ जब तपाई अपार्टमेन्टमा तारिख सञ्चालन गर्न वा घरको सञ्जालमा ब्रेक फेला पार्न आवश्यक छ। सबैलाई थाहा छैन कि यस अवस्थामा बहुविधको प्रयोग कसरी गर्ने, तर तपाईले मात्र प्रतिरोध माप माप क्षेत्रमा स्विच गर्न आवश्यक उचित मापदण्डमा सेट गर्न आवश्यक छ। उपकरणमा ध्वनि सिग्नलिंग छ जुन सर्किट बन्द छ। यदि कुनै सङ्केत छैन भने, यसको मतलब यो हो कि कहीं त्यहाँ 50 ओम भन्दा माथि सर्किटको ब्रेक वा प्रतिरोध मूल्य हो।
न्यूनतम रिजर्वेज (200 ओएम सम्म) को दायरा शर्ट सर्किट भनिन्छ। यदि तपाइँ एक-अर्कालाई रातो र कालो जाँच जोड्नु हुन्छ भने, उपकरणले शून्यको मान बन्द गरेको हुनुपर्छ।
चिनियाँ बनाइएको डीटी -830 बी बहुइटरमा निम्न विशेषताहरू छन् जब विद्युत पुनर्जागणको माप :
संकेतहरूको उच्च त्रुटि।
जब रिजर्भेसनबाट सानो रिजर्भेसनको मापदण्ड, यो जांचको सम्पर्कमा प्राप्त मान घटाउन आवश्यक छ। यसो गर्न, तिनीहरू प्रारम्भिक बन्द छन्। सेक्टरको अन्य दायराहरूमा त्रुटि घटाइयो।
2. डीसी भोल्टेज कसरी उपाय गर्ने
उपकरण DCV क्षेत्रमा स्विच गर्दछ,5दायरामा विभाजित छ। स्विच मानहरूको एकदम उच्च दायरामा सेट गरिएको छ। जब3बिट वा 12 V को ब्याट्रि पावरको साथ भोल्टेजको माप, तपाइँ सेक्टरलाई "20" मा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एक ठूलो मान सेट गर्नु हुँदैन, किनकि पढ्ने त्रुटिले वृद्धि गर्नेछ, र सानो मूल्य संग, यन्त्र जलाउन सक्छ। कुनै न कुनै मापको लागि, शुद्धता केवल 1 V हो भने, बहुिम्याट तुरुन्तै "500" लाई सेट गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी, जब मापन भोल्टेज परिमाणमा अज्ञात छ। त्यस पछि, तपाईले दायरालाई कम मूल्यहरूमा बिस्तारै स्विच गर्न सक्नुहुनेछ। "HV" चेतावनी, माथिल्लो बायाँ कोनेमा रोशन गर्दछ, मा उच्चतम तह मापन गर्दछ। यद्यपि उच्च वोल्टेजहरूले उपकरणको साथ काम गर्दा सावधानी चाहिन्छ, यद्यपि डीटी -830 बी मल्टीमीटरको वाल्टमीटरको रूपमा यो एम्मेटेर वा ओहोमिटर भन्दा सुरक्षित छ।
डिजिटल साधनको लागि जाँचहरूको ध्रुवीकरण अवलोकन गर्नु आवश्यक छैन। यदि यो मिल्दैन भने, यसले पढाइको मात्रालाई असर गर्दैन, र "-" साइन बायाँमा रोशनी।
3. एसी भोल्टेज कसरी निर्धारण गर्ने
ACV सेन्टरमा स्थापना एकै तरिकाले डीसीवीमा प्रदर्शन गरिएको छ। 220-380 V को उच्च भोल्टेजले असक्षम जडानको कारण यन्त्रलाई मालफूल गर्न सक्छ।
4. प्रत्यक्ष वर्तमान को माप को माप
इलेक्ट्रनिक सर्किट को लागि सानो सीढी डीसीए क्षेत्र मा मापन गरिन्छ। यी स्विच पदहरूमा, भोल्टेज माप अनुमति छैन। यस अवस्थामा, एउटा शर्ट सर्किट हुनेछ।
हालको मानलाई मापन गर्न 10 ए तेस्रो सकेट हो, जसमा रातो जांच पुनरावृद्धि गर्नुपर्छ। केवल केहि सेकेन्डमा संकेत लिन सकिन्छ। सामान्यतया एक बिजुली हाल एम्मेटेर मापन गरिन्छ। यस अवस्थामा सावधानीपूर्वक साधन प्रयोग गर्नुहोस् र जब मापन आवश्यक हुन्छ।
5. डायोडको सेवाशीलताको जाँच गर्नुहोस्
डाइओडमा विपरीत दिशामा, उपकरण अनन्त देखाउनुपर्छ (बाँयामा इकाई)। अगाडी दिशा मा, संक्रमण मा वोल्टेज 400-700 एमवी छ।
यस क्षेत्रमा, तपाईं ट्रांजिस्टरको पनि उपयोगिता जाँच गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यो दुई डायोड को रूप मा प्रतिनिधित्व गरिन्छ, जोडिएको डायोड, तोडने को लागि प्रत्येक संक्रमण को जांच को लागि आवश्यक छ। यसको लागि यो आधार कहाँ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। प्रकार pnp को लागि यो एक सकारात्मक जांच संग एक सकारात्मक टर्मिनल (बेस) को खोज गर्न आवश्यक छ ताकि नकारात्मक जांच अन्य दुई (emitter र कलेक्टर) मा अनंत देखिन्छ। यदि ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप हो भने, आधार एक नकारात्मक जांच हो। इमिटर पत्ता लगाउन, यो यसको संक्रमणको प्रतिरोध को माप पर्दछ, जुन कलेक्टरको प्रतिरोध भन्दा ठूलो छ। सेवा योग्य तत्वको लागि, यो 500-1200 ओममा दायरामा हुनुपर्छ।
अग्रेषित र उल्टो दिशामा बहुिम्याटरको साथमा ट्राफिकेशनहरू कल गरेर, तपाइँ निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि ट्रांजिस्टर काम गरिरहेको छ वा छैन।
6. सेक्टर hfE
यन्त्रले h21 ट्रान्जिस्टरको हालको लाभ निर्धारण गर्न सक्छ। यो गर्नका लागी, केवल उपयुक्त सुकेट जेबहरूमा3वटा पिन घुसाउनुहोस्। प्रदर्शनले "h21" तुरुन्तै देखाउनेछ। सही नतिजा पाउनका लागि, तपाईंलाई पीएनपी (दायाँ प्यानको दाहिने तिर) र एनपीएन (बाँया छेउ) भेद गर्न आवश्यक छ।
7. उपकरण सुधार गर्न सम्भावना
DT-830B मल्टीमिटरमा, निर्देशनले निश्चित कार्य प्रदान गर्दछ। मोडेलहरू एकअर्काभन्दा फरक फरक हुन्छन्, र यदि चाहनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै पनि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि, संधारित्र क्षमता समापन, तापमान र पहिले सूचीबद्ध सबै अन्य कार्यहरू थप गर्नुहोस्।
विज्ञापन र प्रतिक्रियामा बहुिमित्र DT-830B को विवरण एकदम सही छ।
मल्टीमीटर को आधार एक एनालॉग देखि डिजिटल कनवर्टर (एडीसी) हो।
मल्टीमिटर डीटी -830 बी: योजनाबद्ध र मरम्मत
सस्तो सानो आकारको उपकरणको लागि, ICL7106 प्रायः प्रयोग गरिन्छ।
जब भोल्टेज को माप गर्दा, सिग्नल आर17 को चिप 31 को इनपुट 31 मार्फत स्विचबाट पठाइएको छ। जब एसी भोल्टेज मापन गरिन्छ, यो डायोड डी 1 को माध्यम ले सुधारिएको छ, जसको संकेतले पनि चेन्ज मार्फत माइक्रोक्रिरकोट टर्मिनल 32 सम्म पुग्छ।
माईसी डीसीले प्रतिरोधक मा एक भोल्टेज ड्रप उत्पन्न गर्दछ, जसको पछि संकेत पनि इनपुटमा लागू हुन्छ 32. चिप एक 0.2 ए फ्यूज द्वारा इनपुट मा स्थापित हुन्छ।
सम्पर्कहरु को हानि र गलत स्विचन को कारण उपकरण अक्सर टूटन्छ। सबैभन्दा पहिला, फ्यूज जाँच गरिन्छ र परिवर्तन गरिएको छ।
यन्त्रले भोल्टेज भोल्टेज मापमा काम गर्दछ, किनकि यो ओभरलोड्सबाट इनपुटमा राम्रोसँग सुरक्षित छ। विफलता हुन सक्छ जब प्रतिरोध वा वर्तमान मापन गर्दछ।
जलाशय प्रतिरोधकहरू नेत्रहीन रूपमा निर्धारित गर्न सकिन्छ, र डायोडहरू र ट्रांजिस्टरहरू पहिले दिएका पद्धतिहरू प्रयोग गरेर जाँच गर्न सकिन्छ। ब्रेकहरूको अनुपस्थिति र सम्पर्कहरूको विश्वसनीयताको लागि जाँच्नुहोस्।
यन्त्रको मरम्मत गर्दा, पहिला विद्युत आपूर्ति जाँच गरिएको छ। त्यसपछि, माइक्रोकोयरकोट राम्रो काम गर्ने क्रममा छ। यो पिन 30 मा3भोल्टेजमा भोल्टेज, यदि पावर आपूर्ति र चिप को सामान्य पिन को बीच कुनै बिच्छेदन छैन भने काम योग्य हुनु पर्छ।
असहज हुँदा, तपाईंले स्विचको बल गुमाउनु हुँदैन, बिना यो सुरक्षित रूपमा तय हुनेछैन।
कहिले ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्छ?
उपकरणको बिजुली आपूर्ति अनुमानको प्रदर्शन र विचलनमा अङ्कहरूको विफलताको मामलामा अनुमानित ज्ञात मानहरूको परिणामहरू परिवर्तन गर्दछ। ब्याट्रिको तस्वीर स्क्रिनमा देखिन्छ। यसलाई बदल्न, ब्याक आवरण हटाउनुहोस्, पुरानो एउटा हटाउनुहोस् र नयाँ स्थापना गर्नुहोस्।
बहुविध डीटी -830 बी प्रयोग गरेर धेरै सजिलो छ: ब्याट्रि सजिलैसँग र धेरै नै राम्ररी परिवर्तन गर्दछ। केवल उसलाई संग सावधानीपूर्वक काम गर्न आवश्यक छ। यन्त्र गलत रूपमा प्रयोग गर्दा सजिलै जलाउन सकिन्छ।
यन्त्रको बारे समीक्षाहरू
डिजिटल मल्टीमीटर DT-830B को रूपमा यस्तो उपकरणको बारेमा समीक्षाहरू प्रायः सकारात्मक छन्। यो अनौठो, बहुभाषी हो, र ब्याट्री वर्षको लागि हुन्छ। सबै उपकरणको कम मूल्यसँग सन्तुष्ट छन्। टिप्पणीहरू मात्र साना कुराहरूमा देखा पर्छ।
स्टाइललाई प्रतिस्थापित गरिनु पर्छ, किनकि तिनीहरू चाँडै असफल हुन्छन्। तिनीहरूको प्रतिरोध मानक एक नजिक छ र 0.5 ओम हुन्छ।
बहुसंख्यक डीटी -830बी एक सार्वभौमिक उपकरण हो, गृह मालिकको लागि र व्यावसायिकको लागि आवश्यक। यसमा धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छन् र सस्तो छ। सफल प्रयोगको लागि यो विस्तारमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ कि एक DT-830B मल्टीमीटर छ। अपरेटिङ निर्देशनहरू सख्त रूपमा पालन गर्न अनिवार्य छ, ताकि यन्त्रको विफलताको लागि कुनै त्रुटिहरू छैनन्।
घरको लागि इस्त्री प्रणाली: विशेषज्ञ समीक्षा र खरिदहरू
फाउन्टेन पंप - तपाईंको तालाबको लागि राम्रो समाधान
ताररहित लोहा "Tefal": समीक्षा, कार्य सिद्धान्त, निर्देशन
एक क्रोरोमीटर छ? विस्तृत विश्लेषण
गेराजमा आफ्नो आफ्नै हातले कसरी स्टोभ स्थापना गर्ने?
छत Whitewashing: कसरी अनावश्यक समस्या जोगिन
Bibiana Steinhaus - क्षेत्र मा प्रहरी
सेम फ्लोलो ("डोम-2"): जीवनी, रचनात्मकता र व्यक्तिगत जीवन
जीवन पथ अभिनेता Valery Filatov, Filmography र रोचक तथ्य
एसेटिकएसिड शारीरिक गुणहरू, सूत्र
Camilla Parker Bowles (Camilla Parker-Bowles): कर्नवाल को रानी को जीवनी
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध र विदेशी नीति, रक्षा क्षमता कारक, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, अर्थव्यवस्था को सीमाहरु को विस्तार को पूर्वसन्ध्या मा सोभियत संघ
आफ्नै गलैँचा डाई।
सम्भव समस्या र आफ्नो समाधान: को स्टार्टर गर्म मा उत्तेजित गर्दछ। सकल वाहन निदान
"Boldin शरद" Pushkin - यो सबैभन्दा कवि समय मा फलदायी
Ilyichevsk मा आराम: recreation centers, conditions, benefits
घोडाहरू: दुई सरल व्यञ्जनहरू